[တရားဝင်] dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Lock ကိုမျက်နှာပြင် PIN နံပါတ်၏ဖယ်ရှားရေး, Password ကို, လက်ဗွေ & စံနမူနာ
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက် Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး
5 မိနစ်အတွက် Android ကိုသော့ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပါ။
4 မျက်နှာပြင်သော့ခတ်အမျိုးအစားများကို Remove - ပုံစံ, PIN နံပါတ်, စကားဝှက် & လက်ဗွေရာ။
သာမှာအားလုံးမျှ data တွေကိုအရှုံးသော့ခတ်မြင်ကွင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Samsung Galaxy S / မှတ်ချက် / Tab ကိုစီးရီးများနှင့် LG က G2 မှာ / G3 / G4, etc များအတွက်အလုပ်
သင်သည်သင်၏ Android ကိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ password ကိုမေ့သို့မဟုတ်ရုံတစ်စက္ကန့်လက် device ကိုရရှိရန်နှင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ပတ်စ်ကုတ်မသိရပါဘူးနေပါစေ, ဤ Android Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး, ပုံစံအပါအဝင်5မိနစ်အတွက်အမည်မသိပတ်စ်ကုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင့်အားဖွ PIN နံပါတ်, စကားဝှက်နှင့် fingerprint ။ သင်ရွေးချယ်ပတ်စ်ကုတ်မည်သို့ပင်, သင်သည်ဤသည် Android Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူကဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာမဆိုဒေတာမဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ Android Device ကိုသော့ခတ်?
ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက် Android ကို Lock ကိုမျက်နှာပြင် Remove
ရှည်လျားသောရှေ့မှာ setting ပြီးနောက် password ကိုမေ့နေ
သော့ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်စက္ကန့်လက်ကို Android device ကိုရတယ်
မျက်နှာပြင်ကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာများအတွက်မှားယွင်းတဲ့ password ကိုဝင်ရောက်ဖို့သော့ခတ်နေသည်
Android ပေါ်မှာ Lock ကိုမျက်နှာပြင် Remove
ပုံစံ, PIN နံပါတ်, စကားဝှက် & လက်ဗွေ: သင်မျက်နှာပြင်သော့ခတ်၏လေးမျိုးဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်
အဘယ်သူမျှမမှာ Data ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ Android ကို Lock ကိုမျက်နှာပြင် Remove
သာက Android Device များပေါ်တွင်သင်၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပစ်ရဤ Android သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေး။ ဒါဟာအပေါ်မည်သည့်ဒေတာများကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Samsung နှင့် LG ကဖုန်းများအတွက်နှင့်အတူအလွန်အလုပ်မလုပ်
Android အတွက်ဒါကသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေးကို Samsung နှင့် LG Device များအများစုအဘို့ကြီးသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ကစာရင်းစစျဆေးနိုငျ ကဒီမှာ ။
သငျသညျကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ခက်ခဲတစ်ခုခု၏ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်ဤ Android သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေးကို run ။ ထိုအခါသင်သည်တစ်ဦးတည်းသာကလစ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့။
အန်းဒရွိုက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဘို့ဤသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေးလုံးဝကိုဖတ်သာဖြစ်ပါသည်ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
အန်းဒရွိုက်မျက်နှာပြင် Lock ကို4အမျိုးအစားများ Remove
မှာ Data ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ
ဤ Android Lock ကိုမျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားရေးပုံစံ, PIN နံပါတ်, စကားဝှက်နှင့် fingerprint ၏ passcode ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမနည်းပညာအသိပညာမေးတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင့်စကားဝှက်သည်အဘယ်အရာကိုသင်သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်မဆိုဒေတာမဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ်ကြောင့်အများဆုံးက Samsung ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်မကြာမီလာမယ့်နေကြသည်။
အိမ်မှာ5minites သင်၏အထဲမှာသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပါ။
သင်သည်သင်၏ data နဲ့အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း
1 GB ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
samsung note ကိုအပေါ်ကောင်းသောအလုပ်မလုပ်, ကိုယ့်လိုလူအပေါင်းတို့ကိုရှာဖွေပေမယ့် S3 mini နှင့်အတူပြဿနာရှိ
ဆိုးဆိုးရွားရွားဒီလိုအပ်ပါတယ်! Awesome ကို!
ဒါဟာငါမလိုအပ်အတိအကျဘာ \_ 's ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဒေတာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ငါ့ပြဿနာ ... ဂရိတ်ဖြေရှင်း!
Awesome ကို! တန်သည်။
အများဆုံးဟာ android software ကိုစမ်းသပ်ပြီးသာ Wondershare ပြဿနာများမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Bypass လုပ်ရ Samsung က Lock ကိုမျက်နှာပြင်မှ9နည်းလမ်းများ
Samsung ရဲ့ Galaxy S3 ကို Unlock လုပ်နည်း
အဘယ်အရာကိုသင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းထဲကသော့ခတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့
PIN နံပါတ်မပါဘဲက Android Phone ကို Unlock လုပ်နည်း
/ Bypass လုပ်ရကို Android Pattern ကို Lock ကို Unlock ဖို့လေးနည်းလမ်းများ
Samsung Galaxy S5 ကို Unlock3နည်းလမ်းများ
Android ပေါ်မှာ Lock ကိုမျက်နှာပြင် Wallpaper ပြောင်းလဲနည်း
Android ပေါ်မှာက Wi-Fi ကို Password ကိုဘယ်လိုပြမလဲ